XOG: Maxaa ka jira In Qabriga Jen. Ceydiid Lagu aragay Mucjisiyaal Ay ka Mid Yihii….. | Xaqiiqonews
XOG: Maxaa ka jira In Qabriga Jen. Ceydiid Lagu aragay Mucjisiyaal Ay ka Mid Yihii…..
Jen. Maxamed Faarax ceydiid waxa uu ka mid yahay hogaamiyaashii ugu caansanaa ee soomaaliya inkastoo ceydiid uu ahaa dagaalyahan wax badan gor u qaaday magaca beeshiisa balse waxaa ugu danbeyn noolashiisa soo gabagabaayey dad ay qaraabo ahaayeen oo isku hal jufo ay ka soo wada jeedeen.
ka dib dhimashadii ceydiid waxaa soomaalida dhexdeeda lagu baahiyey Khuraafaad iyo sheekooyin cajiib ah oo ay ka mid ahaayeen in qabriga ceydiid uu habeenkii Ifo, In Ceydiid lagu argay riyo isaga oo janada ku jira iyo khuraafaad kale sida in Mareekanka ay doonayaan in Ceydiid qabrigiisa Fagtaan si ay ay maskaxda ceydiid ula baxaan Iwm.
sida uu sheegay mid ka mid ah dadka ku nool Qabuuraha Barakaat Waxaa la ilaalin jiray Qabriga Ceydiid iyadoo sida la sheegay laga cabsi qabay In Dowladda Mareekanka Ay la baxdo meydka marxuunka.
Maxey Tahay Sababta Loo Faafiyey Khuraafaadka Intaasi La eg